Wax waliba oo aad uga baahan tahay isku aadka wareegga 16-ka Champions League oo maanta la sameynayo – Gool FM
Haaruun December 16, 2019
(Yurub) 16 Dis 2019. Waxaa maanta la sameynayaa isku aadka wareegga 16-ka UEFA Champions League, iyadoo la filan karo inay kooxo waa weyn isku aadaan.
Haddaba waxaan halkaan hoose kuugu soo gudbinaynaa wax waliba oo aad uga baahan tahay isku aadka wareegga 16-ka Koobka horyaallada Yurub oo maanta la qabanayo.
Goorma ayaa la sameyn doonaa isku aadka wareegga 16-ka Champions League?
Isku aadka wareegga 16-ka Koobka horyaallada Yurub ee UEFA Champions League ayaa la sameyn doonaa maanta oo ay Taariikhdu tahay 16-ka bisha December oo ku beegan Isniin, waxaana lagu qaban doonaa xarunta xiriirka kubadda cagta qaaradda Yurub ee UEFA oo ku taala magaalada Nyon ee Waddanka Switzerland.
Saacaddee la sameyn doono isku aadka Wareegga 16-ka Champions League?
Isku aadka ayaa TV-yada laga soo deyn doonaa 11:00 barqanimo saacadda UK oo ku aaddan 2:00 Duhurnimo saacadda geeska Afrika, sidoo kale isku aadka tartanka Europa League ayaa isna la sameyn doonaa isla maanta marka ay saacadda geeska Afrika tahay 3:00 Galabnimo.
Sida ay kooxuhu ugu soo kala baxeen kaalimaha:-
Kooxaha ku soo baxay kaalinta koowaad ee Guruubkooda:-
Barcelona (ESP, Group F)
Bayern Munich (GER, Group B)
Juventus (ITA, Group D)
Liverpool (ENG, Group E)
Manchester City (ENG, Group C)
RB Leipzig (GER, Group G)
Valencia (ESP, Group H)
Kooxaha ku soo baxay kaalinta labaad ee Guruubkooda:-
Napoli (ITA, Group E)
Real Madrid (ESP, Group A)
Tottenham (ENG, Group B)
Dortmund (GER, Group F)
Lyon (FRA, Group G)
Atletico Madrid (ESP, Group D)
Atalanta (ITA, Group C)
Tartankan wareeggiisa 16-ka iskuma aadi karaan labo kooxood oo isku waddan ah, halka sidoo kale aan la isku beegi doonin labo kooxood oo hal guruub ka soo wada baxay, sidaasi awgeed kooxo badan ayaa kala badbaadi doona.
Goormee la ciyaari doonaa wareegga 16-ka Champions League?:-
Lugta koowaad ee wareegga 16-ka Champions League ayaa la ciyaari doonaa 18/19 & 25/26 bisha Febraayo 2020.
Lugta labaad ee wareegga 16-ka Champions League ayaa iyana la ciyaari doonaa 10/11 & 17/18 bisha Maarso 2020.
Wax waliba oo aad uga baahan tahay isku aadka wareegga 32-ka Kooxood ee Europa League oo maanta la sameynayo